I-Stroke (kanye nesifo senhliziyo) kushukela kanye nemiphumela yako > Izinkinga zesifo sikashukela
Inhlanganisela eyingozi: unhlangothi ngesifo sikashukela nemiphumela yako
Isifo senhliziyo (CVD) kanye ne-ischemic stroke ezinye zezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela kanye nembangela enkulu yokufa ngaphambi kwesikhathi kwabanesifo sikashukela - cishe ama-65% abo abulawa yisifo senhliziyo kanye nesifo sohlangothi sikashukela.
Isiguli esivela kubantu abadala sinamathuba okuphindwe ka-2-4 okuba nesifo sikashukela kunabantu abangenaso lesi sifo. I-glucose ephezulu ye-diabetesics yabantu abadala ikhulisa ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo, unhlangothi, i-angina pectoris, ischemia ivame ukuba khona.
Abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2 ngokuvamile baba nomfutho wegazi ophakeme, i-cholesterol nezinkinga zokukhuluphala, ezingaba nomthelela ohlangene wezehlakalo zesifo senhliziyo. Ukubhema kuyiphinda kabili ingozi yokuba nesifo sohlangothi kubantu abanesifo sikashukela.
Ngokusho kwezifundo zesayensi, ubungozi besifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi kukhuphuka izikhathi ezi-2 kubantu abanesifo sikashukela kunakubantu abaphilile. Ngokwezibalo, ezigulini ezi-2 kwezi-3 ezinesifo sikashukela, izifo ezinjengokugwazwa nesifo sikashukela ziyahambisana.
Kukhona nezinye izinto eziningi ezisengozini ezihlanganisa isimo. Lezi zici zobungozi zingahlukaniswa ngokuthi zilawulwe futhi zingalawulwa.
Okokuqala yilezo zinto umuntu angazilawula. Lokhu kufaka, ngokwesibonelo, ukwenza ngcono isimo sempilo. Okungalawulwa kuphume ekuphathweni ngumuntu.
Izici Ezilawulwayo Zobungozi
Okulandelayo uhlu lwezimpawu zobungozi ezingalawulwa futhi zigcinwe ngaphakathi kwemikhawulo ephephile ngokusebenzisa ukwelashwa okufanele noma ushintsho lwendlela yokuphila, kanye nemikhawulo yokudla.
Ukukhuluphala ngokweqile: kuyinkinga enkulu yabanesifo sikashukela, ikakhulukazi uma lesi simo singabonakala endaweni ephakathi yomzimba. Ukukhuluphala okuphakathi kuhlanganiswa nokuqongelelwa kwamafutha emgodini wesisu.
Kulesi simo, ubungozi bokushaywa yisifo sikashukela nemiphumela yako kuzozwakala, ngoba amafutha asesiswini anesibopho sokuphakamisa izinga le-cholesterol embi noma i-LDL. Ngezinga eliphakeme le-LDL, ukufakwa kwamafutha ngaphakathi komkhumbi nakho kuyanda, ngaleyo ndlela kudale izithiyo ekujikelezweni kwegazi. Lokhu kudala izinkinga zenhliziyo ngokuzenzakalelayo futhi kwandise nengozi yokushaywa unhlangothi.
I-cholesterol Engafanele: Ukwanda kwe-cholesterol kungakhulisa nobungozi besifo senhliziyo nesifo sohlangothi. Emazingeni aphezulu we-LDL, amanoni amaningi angahlala ezindongeni zemithambo yegazi, okuholele ekujikelezweni okungahambi kahle. Kwezinye izimo, imithambo yegazi ivinjiwe ngokuphelele futhi, ngenxa yalokho, ukugeleza kwegazi kule ndawo kuncishisiwe noma kumiswe ngokuphelele. Futhi, i-cholesterol enhle, noma i-HDL, ikhipha amafutha omzimba emithanjeni yemithambo yegazi.
Umfutho wegazi ophakeme: umfutho wegazi ophakeme, unhlangothi nesifo sikashukela yizifo “ezihlobene”. Ngomfutho wegazi ophakeme, ingcindezi enhliziyweni ikhuphuka, engalimaza umsebenzi wayo futhi, ngasikhathi sinye, ikhulise ingozi yokuhluleka kwenhliziyo.
Ukubhema: isifo sikashukela nokubhema kuyinhlanganisela embi. Ukubhema kungenza imithambo yegazi ibe mncane futhi kwandise ukugcinwa kwamafutha. Ingozi ezimeni ezinjalo inyuka ngezikhathi ezi-2.
Izici zobungozi ezingalawulwa
Kodwa-ke, kunezici ezithile zobungozi ezingalawulwa:
Ukuguga: inhliziyo ibuthakathaka kanye nobudala. Kubantu ngemuva kweminyaka engu-55 yobudala, ingozi yokushaywa unhlangothi ikhuphuka amahlandla ama-2.
Umlando womndeni: uma kunesifo senhliziyo noma unhlangothi emlandweni womndeni, ubungozi buyakhuphuka. Ikakhulu uma othile emndenini ehlushwa isifo senhliziyo noma unhlangothi ngaphambi kweminyaka engu-55 (amadoda) noma iminyaka engama-65 (abesifazane).
Ubulili: Ubulili nakho kungenye into ebalulekile. Abesilisa basengozini ephezulu kunabesifazane.
Manje njengoba usujwayele izici eziyingozi ezinkulu, ungathatha izindlela ezidingekayo zokubhekana nazo. Kunezidakamizwa eziningana kanye nenani elikhulu lezindlela zokuvimbela.
Yini i-CHD futhi ihlobana kanjani nesifo sikashukela?
I-IHD (isifo senhliziyo) iyisiphithiphithi somsebenzi wenhliziyo, okuholela ekunikezelweni kwegazi okunganele emisipha yenhliziyo. Imbangela yisifo semithambo yegazi ehambisa igazi enhliziyweni. Le mikhumbi ivame ukulinyazwa yi-atherossteosis. I-CHD ingaba yingozi noma ingamahlalakhona.
Uma kwenzeka ukunganeli komoya-mpilo okunganele emsipha wenhliziyo kanye nokungabikho kokufinyeleleka kwemikhiqizo ye-metabolic evela kuleli izicubu, i-ischemia (ukunikezwa kwegazi okunganele) futhi, ngenxa yalokho, kuphakama i-myocardial infarction (izicubu zenhliziyo). Uma i-ischemia ihlala isikhashana, izinguquko ezibangelwa yilesi sifo ziyaphenduka, kepha uma izinguquko ziqhubeka isikhathi eside, izinguquko zenzeka emisipha yenhliziyo ezingabuyeli esimweni sazo sokuqala, kanye nezinguquko ezicutshini zenhliziyo, oba engasebenzi, kancane kancane upholisa nezibazi. Izicubu ezibucayi azikwazi ukwenza umsebenzi ofanayo nomsipha wenhliziyo onempilo.
Uma ukungena kwemithambo ye-coronary "kuphela" kuphela, futhi kwezinye izingxenye zomkhumbi kukhona i-lumen, umkhumbi ngokufanele ubonakala kancane, ukumanzana okuyi-myocardial infraction akukhuli, kepha i-angina pectoris, ebonakaliswa ubuhlungu besifuba ngezikhathi ezithile. Lesi simo senzeka lapho kunokungaboni ngaso linye phakathi kokuhlinzekwa komoya-mpilo kanye nokulahlwa kukadoti we-metabolic kanye nezidingo zenhliziyo. Lesi simo sivame ukwenzeka, ngokwesibonelo, phakathi kwezimo ezicindezelayo (zombili ezithukuthelisayo nemizwa emnandi), ukuguquka kusuka kokushisayo kuya kobandayo, umsebenzi owengeziwe womzimba, njll.
Izimo ezingazelelwe zokushaywa unhlangothi nesifo sikashukela
Amaphutha wokudla (imikhawulo ngokweqile yokudla ushukela).
Isicanucanu, indlala, ubuthakathaka, ukujuluka.
I-palpitations yenhliziyo, ukudideka, noma ukuphazamiseka kokuziphatha (ukuziphatha kufana nokudakwa).
Ukuphefumula okungenamizwa, ukuthuthumela okungashisi, ukwethuka, ukugoba, ukoma.
I-Hyperglycemia (ushukela wegazi ophakeme - ushukela> 10 mmol / l).
Ukuthuthukiswa kwalesi sifo kuhlobene ngqo nokuvalwa noma ukulimala kwemithambo yegazi.
Kungaleso sikhathi amandla okusebenza wobuchopho aqala ukuwohloka, ngoba igazi ligeleza kahle engxenyeni ethile yalo.
Njengoba wazi, amaseli akhe aqala ukungasebenzi ngemuva kwemizuzu emithathu yokuntuleka komoya-mpilo okungazelelwe.
Ngokusho kwesigaba, kunezinhlobo ezimbili zokugula: hemorrhagic and ischemic. Esokuqala senzeka ngenxa yokuqhuma kwe-artery, nesesibili - ngenxa yokuvalwa kwaso.
Kunento eyodwa eyisisekelo enganquma ukuthi yi-coefflements ye-predisposition to stroke - ukuba khona komfutho wegazi ophakeme.
Imikhuba engathandeki njengokulutha kwe-nicotine nokudla i-cholesterol embi, evala imithambo yegazi, kungathinta kakhulu ukukhula kwayo.
Kungakho udinga ukubonana nodokotela futhi uthole ukuthi yini ongayidla ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela, ukuze ungaphindi iphutha elenziwe ngaphambili.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kubantu abaphethwe i-glucose engasebenzi kahle, lesi sifo sinzima kakhulu. Abakwazi ukukubekezelela ngokujwayelekile, ngoba ngenxa yokuba khona kwe-atherosclerosis, imithambo emikhulu futhi ebalulekile ayikwazi ukukhipha izingxenye ze-oxygen. Ngeshwa, ukuhlaselwa ubukhona besifo sikashukela kuyinto edumaza kakhulu futhi edabukisayo.
Lapho uthola izimpawu zokuqala, kubaluleke kakhulu ukubiza i-ambulensi ngokushesha. Kulokhu, unganqikazi, ngoba konke kungaphela ngokudabukisayo kakhulu. Akunakusho ukuthi kufanele uqale inkambo yalesi sifo, kodwa okuphambene nalokho, kubalulekile ukumisa ukuqhubeka kwayo ngesikhathi.
Izimpawu zokuqala zesifo sohlangothi yilezi:
umuzwa wokuba buthakathaka komzimba, ukubonakala kokuqina kwamalunga nemilenze nobuso,
ukukhubazeka ngokuzumayo nokungakwazi ukuhambisa ingxenye ethile yomzimba,
ukucabanga kabi, ukulahlekelwa amandla okukhuluma noma ukuqonda ukukhuluma,
umbono othusayo wento ezungezile,
ubunzima bokugwinya izingqondo,
ukulahleka kokulinganisela nezinkinga ezihambisana nokuhlanganiswa okujwayelekile kokunyakaza, okuhambisana nobuthakathaka,
ukulahlekelwa ukwazi imizuzwana embalwa.
Udinga ukubhekisisa ngokucophelela ukudla okudlayo, ngoba yikuthi kungaba nemiphumela emihle futhi emibi empilweni kanye nemiphumela yesifo.
Kubalulekile kakhulu ukubheka izindlela zokuvimbela lesi sifo ukuvikela lesi sifo.
Ukudla okulungile kuphela kwesifo sohlangothi nesifo sikashukela okufanele kudliwe, ngoba lokhu kungadlala indima enkulu ekugcineni izikebhe ziphilile.
Futhi, ungakhohlwa ngokugcina indlela yokuphila esebenzayo, esekelwa inani elanele lomsebenzi womzimba.
Udokotela ohambelayo kufanele anikeze imishanguzo efanele, ukusetshenziswa kwayo okuzovikela ukuvalwa kwemikhumbi eminye, futhi njengoba wazi, kunganciphisa ukukhula kwesifo sohlangothi.
Ubunzima bezindlela zokuthibela buhlanganisa:
ukwenqaba ngokuphelele ukusetshenziswa kwazo zonke izinhlobo zemikhiqizo kagwayi,
ukusetshenziswa okulinganiselayo kweziphuzo eziqukethe utshwala,
ukuqapha amazinga we-cholesterol, ikakhulukazi lawo asesigabeni “esinobungozi”,
kulandela izincomo zikadokotela
Ukulawulwa kwengcindezi yegazi
Akunconyelwe ukusebenzisa i-aspirin njengesixwayiso sokugula ngaphandle komyalelo kadokotela.
Ukudla isifo sohlangothi kanye nesifo sikashukela yisikhathi esibaluleke kakhulu, okumele sibhekwe. Lokhu kuzogwema izinkinga ezinkulu zempilo ngokuzayo. Kwenza ukuthi sikwazi ukubuyisela umzimba kancane kancane umzimba, kanye nokuqeda ngokuphelele ukuthi kungenzeka ukuphindeka kwento engemnandi.
Imenyu yokudla # 10
Ngisho naseSoviet Union, kwaqalwa imenyu ekhethekile, ebizwa ngokuthi "Ukudla inombolo 10". Kusebenza ikakhulukazi ngoba akufaki ngokwengxenye ekudleni kwansuku zonke lokho kudla okugcwele amafutha nama-carbohydrate. Lokhu yilokho okwenza ukuthi kunciphise kakhulu okuqukethwe kwekhalori yezitsha ezidinga ukudliwa ngosuku.
Ukudla okunesifo sohlangothi kanye nesifo sikashukela kufanele kucatshangwe kahle, kungalingani futhi akunantengo yokudla okunamafutha amaningi, okukubi kakhulu empilweni yemithambo yegazi yomzimba.
Kunemikhuba eminingana ephathelene nokudla kwansuku zonke kwabantu abanethuba elihle lokubonakaliswa:
ukuphuza amanzi anempilo anele. Njengoba umzimba nsuku zonke udinga ukuthola isilinganiso esanele soketshezi, khona-ke ngesifo kufanele kube ngaphezulu kwalokho. Lokhu kungenxa yokuthi ngalesi sifo igazi liwugqinsi kakhulu, ngakho-ke, kufanele lihlanjululwe ukuze kugwemeke ukubhujiswa kwemali esele kasawoti. Amanzi acwebile weCrystal ngaphandle kokungcola, umpe wezithelo, ngaphambili obe uxutshwe nenani elithile lamanzi, iziphuzo zezithelo - konke lokhu kukhonjisiwe ukuze kusetshenziswe. Ukuphela kwento okufanele wenqabe iziphuzo nekhofi,
cholesterol ephansi. Kuyadingeka ukunciphisa noma ukuqeda ngokuphelele kwimenyu yonke imikhiqizo enomthelela ekuqongeleleni kwayo emzimbeni. Kungcono ukuthi unakekele ukudla okwenzelwe ushukela onesifo sohlangothi kakhulu ngaphambi kokuba kuvezwe imiphumela emibi,
ukwenqatshwa ngokuphelele kasawoti. Kubaluleke kakhulu ukuyilahla nganoma yisiphi isikhathi sesikhathi. Lokhu kuzovumela isikhathi esithile sokuthuthukisa kakhulu isimo somzimba. Kungaleso sikhathi lapho kuphela lapho kungeniswa khona kancane kancane ekudleni okujwayelekile futhi. Kepha ungakhohlwa ukuthi ubungako bayo kufanele bube buncane,
ukuphuza i-potassium. Kuyadingeka ukuthi ubanikeze umzimba ukuze kusebenze ukusebenza kwenhliziyo ngokwejwayelekile futhi ulethe umfutho wegazi esimweni esijwayelekile,
ivithamini eyinkimbinkimbi. Ungakhohlwa ukuthi imithombo esemqoka yezempilo nempilo enhle kakhulu ngamavithamini ngobukhulu obukhulu, obhekwa njengophondo lomcebo wazo zonke izinhlobo zezithelo nemifino. Zingadliwa zombili zingaphekiwe futhi ziphekwe,
ukungafakwa kwemikhiqizo yekhofi. Kubaluleke kakhulu ukungaphuzi ikhofi,
ukuthatha omega-3. Le asidi ingaba nomphumela omuhle ngokuhlukile. Le nto isiza ukubuyisela umzimba obuthakathaka.
Uma umuntu eye wahlaselwa yisifo sohlangothi, lapho-ke kudingeka ucabangele inketho yokudla okungenamsoco.
Ngabe kwenzeka kanjani ukuba unhlangothi?
Endaweni ethile kunokuntuleka komoya-mpilo, okuholela ekuphulweni komthamo ojwayelekile wokusebenza.
Lokhu kungaba ukuvaleka komkhumbi bobabili, obhekene nokudla kwengqondo, nokuqhekeka kwayo. Womabili la macala abucayi kakhulu, ngakho-ke ukwelashwa akufanele kubambezelwe - ukudla okusebenzayo ngemuva kokushaywa unhlangothi kwisifo sikashukela kuyadingeka.
Kungani imikhumbi ilahlekelwa amandla?
Njengoba wazi, ukuxhumana phakathi kwesifo sikashukela nesifo sohlangothi kusondele kakhulu. Kuqukethe okulandelayo: umuntu osephathe lesi sifo isikhathi esingaphezu konyaka, ubona ukuthi imikhumbi yakhe ilahlekelwa ukuqhuma futhi kuqhume.
Ukubhema, ukungondleki okungenakulinganiselwa, kanye nokuntuleka kokuzivocavoca umzimba njalo emisipha nasemzimbeni wonke kungakhulisa ubungozi bokwephulwa kokwethembeka kwabo.
Ungazibona kanjani izinkinga emzimbeni ngendlela esifike ngesikhathi?
Olunye uphawu lokushaywa unhlangothi nesifo sikashukela ukuhogela umchamo. It, njengomthetho, ithola ithayi elimenyezelwe futhi elimnandi ngokwengeziwe.
Lokhu kusikisela ukuthi inokuqukethwe okuphezulu kwemizimba ebizwa ngokuthi yi-ketone.
Olunye uphawu oluphawu ukuqina komzimba. Kulokhu, umchamo uzoba nephunga elingabekezeleleki le-acetone.
Ngeshwa, imiphumela yokuhlaselwa yisifo sikashukela mellitus iyadumaza kakhulu:
izinguquko emikhunjini emincane kakhulu,
ubungozi besistimu yezinzwa,
ukonakala okukhulu kwemikhumbi ye-retina yama-eyeball,
ukuncipha noma ukulahleka kokuzwela endaweni yezinyawo.
Njengoba wazi, izimpawu zesifo zihambelana ngqo nobukhulu besigaba saso. Lapho zikhanya, yilapho lesi sifo siqhubeka. Umphumela obalulekile emzimbeni ungaba nokudla koshukela onesifo sohlangothi, esizothuthukisa isimo esejwayelekile.
Ukuze ugweme ukuvela kwalesi sifo esiyingozi impela, kubaluleke kakhulu ukuthi ungakhohlwa ngezindlela zokuthibela. Lokhu kuzovumela ukulawula ukuqhubekela phambili kwayo okungenakuphikwa, ukuze kungaqali ukumboza ezinye izingxenye zomzimba womuntu.
Mayelana nobungozi bokushaywa yisifo sikashukela kuvidiyo:
Ngokuqondene ne-prognosis ejwayelekile yesifo sohlangothi ku-mellitus yesifo sikashukela, nazo zonke izincomo eziphuthumayo zikadokotela oholayo, ikakhulukazi, umsoco ofanele, ukuqedwa ngokuphelele kwezimpawu ezinzima nokubuya kwempilo ejwayelekile kungenzeka. Isidingo ngukukhipha ngokushesha ukudla okungenamsoco, okusebenza njengomthombo wokuqala wenani le-cholesterol elihehayo, ukusetshenziswa kwalo okungathandeki kakhulu.Udinga futhi ukuvakashela ihhovisi likadokotela ngendlela esifike ngesikhathi ukuze ubheke isimo futhi uvikele ukulimala esikhathini esizayo kwemithambo ebalulekile yemithambo, imithambo kanye nama-capillaries adla ubuchopho.
Imiphumela ejwayelekile yokuhlaselwa yisifo sikashukela i-mellitus:
1. Umphumela obulalayo.
2. Ukweqiwa komsebenzi wokukhiqizwa kwe-hormone insulin.
5. Umfutho wegazi ophakeme.
7. Izinkinga zokukhuluma.
8. Ukwehluleka ukuqonda amagama womunye umuntu imicabango.
9. Ukukhubazeka okuyingxenye noma okuphelele.
13. Ukulimazeka kokubonakalayo
14. Izinkinga ngemisipha yobuso.
Isifo sohlangothi nesifo sikashukela: i-prognosis
Ukwelashwa kokuhlanganiswa kwalezi zifo zombili kubi kakhulu kunokubakhona kwesinye sazo.
Izici ezithinta impumelelo yokutakula:
1. Isikhathi sokuthuthuka nokwelashwa kwesifo sikashukela ngaphambi kokushaywa unhlangothi.
2. Ushukela wegazi.
3. Uhlobo lwe-infraction ye-cerebral (ischemic noma hemorrhagic).
4. Ukuba khona noma ukungabikho kwe-atherosclerosis.
5. Ukuqina kwengcindezi yegazi (gxuma, umfutho wegazi ophakeme noma ophansi).
6. Ubunzima bokuphazamiseka okubangelwa unhlangothi (izinkinga zokukhuluma, ukukhubazeka, njll.)
Amaqembu wezidakamizwa ajwayelekile:
1. Ukujova kwe-insulin.
2. Izilawuli ze-glucose emzimbeni wohlobo lwe-prandial, ezivuselela ukukhiqizwa kwe-insulin ngamanyikwe.
3. Ama-inhibitors we-enzyme dipeptidyl peptidase-4, okuhloswe ngawo ukubhujiswa kwama-hormone asesiswini (ama-incretins).
4. I-Metformin - esetshenziselwa ukucindezela ukukhiqizwa kwe-glucose ngesibindi.
5. Izinto zokuvimbela ezisheshisa futhi zikhuphule inani le-glucose ekhishwe emzimbeni. Ngemuva kokuthatha i-dapagliflosin noma i-canagliflosin, le monosaccharide iyakhishwa kumchamo.
6. I-pioglitazone - ithinta kahle ukufakwa kwe-insulin ngamangqamuzana.
7. Izinto ezinciphisa izinga lokukhiqizwa koshukela, ezisebenza ngokubambezela ukumuncwa kwama-carbohydrate. Izinto ezinjalo zifaka i-alpha glucosidase inhibitors.
8. ISulfonylurea - ichazwa ukuthi ivuselele ukukhiqizwa kwe-insulin yi-gland, kanye nokwenza ihlele yokusetshenziswa kwaleli hormone ngomzimba.
Umsoco wokuhlaselwa yisifo sohlangothi kanye nesifo sikashukela
Ngemuva kokushaywa unhlangothi, iziguli zezikhungo zezokwelapha zivame ukuzibuza ukuthi yini edliwayo ngemuva kokushaywa unhlangothi ngesifo sikashukela.
Ukudla for unhlangothi kanye nesifo sikashukela: imenyu
Ukudla komuntu nsuku zonke kususelwa emithethweni eyisisekelo ye-PP (umsoco ofanele):
1. Ukuvama kokudla.
2. Ucwaningo oluqinile lokuqanjwa kwemikhiqizo yokudla, ikakhulukazi kokuqukethwe ushukela.
3. Ukukhishwa kokusetshenziswa kokudla okuthosiwe okuqukethe inani elikhulu lamafutha angenampilo we-trans.
4. Ukudla izithelo nemifino emisha. Udinga futhi ukugxila ku-legamu kanye okusanhlamvu okuphelele.
5. Gcina ukubalwa kwama-kilojoule adliwayo - uma uqopha ukusetshenziswa ngokweqile, kuyadingeka ukulungisa usayizi wengxenye wokudla okukodwa.
6. Ungabuphuzi utshwala.
Imikhiqizo enconyelwe unhlangothi nesifo sikashukela:
• okusanhlamvu (okusanhlamvu) - i-buckwheat, i-oats engatholakali ngamakhemikhali, ukolweni, irayisi elinsundu, i-bulgur,
• imifino - izaqathe, ukholifulawa, ithanga, u-broccoli, ugalikhi,
• Inyama emhlophe (inkukhu, iturkey) nezinhlobo ebomvu (yenkomo),
• izinhlanzi ezinamafutha amancane.
Imikhiqizo efakwe kuhlu idliwe i-stewed, ibilisiwe noma ifishiwe.
1. Ushukela namanye amaswidi.
4. Ukubhema inyama.
6. Ilayisi elimhlophe
11. Izithelo ezinenkomba ye-glycemic ephezulu.
12. Imikhiqizo eqediwe uSemi.
Ngithembekile, mathupha angijwayelene kakhulu nezifo ezinjengokushaywa unhlangothi nesifo sikashukela. Nginenye futhi inkinga - i-sclerosis eminingi. Kepha lapho ngilungiselela okuqukethwe okusebenzayo kwebhulogi lami, ngijwayela nezinye "izilonda"
Ngiyaqiniseka ukuthi kufanele ungazami ukubekezelela ukuhlaselwa yisifo sohlangothi, ulinde kuze kube lula, udinga usizo oluphuthumayo lwezokwelapha, futhi ngokuvamile ukunqotshwa unhlangothi kunokugwema ukubhekana nemiphumela yako kamuva.
Isifo sikashukela i-mellitus ischemic stroke: ukondleka kanye nezinkinga ezingenzeka
Ukulimala odongeni lwe-vascular olune-glucose ephezulu egazini kuholela ekwandeni okuyisilinganiso esingu-2,5 sengozini yokuba nesifo sohlangothi ngokuqhathaniswa noshukela uma kuqhathaniswa nabantu abangenaso isifo sikashukela.
Ngokuphikisana nesizinda sokuntuleka kwe-insulin, inkambo yokushaywa kwenkani iyinkimbinkimbi, ukugxila kwesibindi sobuchopho kuyakhuphuka, futhi nezinkinga eziphindaphindwayo zemithambo yegazi nazo zivamile.
Ukushaywa yisifo sikashukela i-mellitus kwenzeka ngezifo ezisesimweni se-cerebral edema, futhi isikhathi sokululama, njengomthetho, sihlala isikhathi eside. Inkambo enjalo enzima kanye ne-prognosis emibi ihlotshaniswa nokushintshwa kwe-atherosulinotic - ukwakheka kwama-cholesterol plaques, i-vascular thrombosis.
Isici esiphazamisa ukuhamba kwegazi yisimo sokuphelelwa ngamandla kwesifo sikashukela esingafakwanga ushukela. Kwenzeka ngenxa yokuthi ama-molecule eglucose adonsela uketshezi lwezicubu ku-lumen yemithambo yegazi.
Amafomu wegazi futhi isitsha sivalekile ngokuphelele, negazi alinakungena ezingxenyeni zobuchopho. Zonke izinqubo ziyaqhubeka ziphikisana nesizinda sokuhlinzekelwa kwegazi okuncane kuya ebuchosheni nobunzima bokwakha izindlela ezintsha zemisipha yokubuyisela ukondleka endaweni ethintekile engqondweni. Izinguquko ezinjalo zivamile ekushayweni kwe-ischemic.
Ekukhulekeni kokuhlukahluka kwe-hemorrhagic yengozi yokuqina kwesibindi, indima eholayo idlalwa ngokuqina ngokweqile kwemithambo yegazi enomfutho wegazi ophakeme, ovame ukuphakama, isinxephezelo esibi kakhulu sesifo sikashukela siyatholakala.
Ungasola ukukhula kwesifo sohlangothi sikashukela ngalezi zimpawu ezilandelayo:
Ukuvela kwekhanda elingazelelwe.
Ngakolunye uhlangothi lobuso, ukuhamba bekukhubazekile, ekhoneni lomlomo noma amehlo awa.
Yenqaba ingalo nomlenze.
Umbono ukhula kakhulu.
Ukuxhumana kokunyakaza kuphazamisekile, i-gait yashintsha.
Ukwelashwa kokushaywa unhlangothi ngokumelene nesifo sikashukela kwenziwa ngendlela yezidakamizwa ezinciphisa imithambo yegazi nokunciphisa igazi, kusetshenziswa i-antihypertensive therapy, futhi izindlela zisetshenziselwa ukwenza ngokwejwayelekile i-lipid metabolism. Zonke iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 ziyelulekwa ukuthi zibe ne-insulin therapy futhi zilawule ushukela wegazi.
Ngokuvimbela izingqinamba eziphindaphindwe emithanjeni, iziguli kudingeka zilandele indlela ekhethekile yokudla.
Ukudla kusiza ukwenza ngokweqile i-cholesterol esegazini futhi kufinyelele izinkomba zokubuyelwa kwesifo sikashukela.
Ukuqokwa kokudla ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela kufanele kusize ukubuyisela izinqubo ze-metabolic futhi kunciphise ukuqhubeka okuqhubekayo kwe-atherosclerosis. Inkomba ebalulekile yesikhathi sokululama ukunciphisa isisindo ngokweqile ekukhulupheni.
Esigabeni esibuthakathaka, ukondleka lapho unenxeba kuvame ukuswakama, njengoba ukugwinya kukhubazeka ezigulini. Ngezindlela ezibucayi zesifo, ukondla ngokuphenya kuyenziwa. Imenyu ingahle ifake isobho lemifino ecubuziwe namapharagi obisi, iziphuzo zobisi olunoshukela, izihlanza zokudla kwengane okungekho ushukela, nazo izithako zokudla okwenziwe ngomumo zisetshenziswa.
Ngemuva kokuthi isiguli sigwinyele ngokuzimela, kepha silale embhedeni, ukukhethwa kwemikhiqizo kungandiswa kancane kancane, kepha konke ukudla kufanele kubiliswe ngaphandle kosawoti nezinongo, kulungiselelwe okusha.
Ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus ngemuva kokushaywa unhlangothi, kuyanconywa ukunciphisa umkhawulo njengokudla okuningi ngangokunokwenzeka okuqukethe i-cholesterol. Lokhu kufaka phakathi:
Imikhiqizo: ubuchopho, isibindi, izinso, inhliziyo kanye namaphaphu.
Inyama enamafutha - iwundlu, ingulube.
Idada noma ihansi.
Inyama ebhemile, umvimba ne inyama ekheniwe.
Inhlanzi ebhemayo, i-caviar, nenhlanzi ekheniwe.
Ushizi we-cottage shizi, ibhotela, ushizi, ukhilimu omuncu kanye no-ukhilimu.
Ukudla amakhalori kufanele kuncishiswe ngokunciphisa amafutha ezilwane, ama-carbohydrate alula. Izinto ezingamakhambi nezisekelo ze-purine azifakwa ekudleni: inyama, amakhowe noma izinhlama, izinhlanzi usawoti ulinganiselwe.
Kunconywa ukuthi kufakwe ukudla okugcwele usawoti we-magnesium ne-potassium, kanye nezakhi zomzimba ze-lipotropic ezenza ngokwejwayelekile umzimba we-metabolism (ukudla kwasolwandle, ushizi wekhishi, amantongomane). Ukudla kwesifo sohlangothi kufanele kube namavithamini anele, i-fiber kanye nama-acid angenakugcwala, ayingxenye yamafutha zemifino.
Ukudla kufanele kuthathwe izikhathi ezingama-5-6 ngosuku, izingxenye akufanele zibe zinkulu. Ngenkathi yokupheka, usawoti awusetshenziswa, kodwa unikezwa isiguli ezingalweni zakhe ngosawoti. Uma izinga lokucindezela kwegazi livamile, khona-ke kufika ku-8-10 g kasawoti ngosuku, futhi uma iphakanyisiwe, khona-ke kukhawulelwe ku-3-5 g.
Okuqukethwe kwekhalori nokuqukethwe kwezakhi eziyisisekelo ekudleni kuya ngezinga le-metabolism eyisisekelo, isisindo kanye nezinga lokuphazamiseka kokujikeleza. Kunezindlela ezimbili:
Ukudla kokuhlaselwa yiziguli ezikhuluphele noma i-vascular pathology enzima. Okuqukethwe kwekhalori kwe-2200 kcal, isilinganiso samaprotheni, amafutha, ama-carbohydrate -90: 60: 300.
Ukudla kweziguli ezinesisindo somzimba esinciphile noma esivamile. Amakhalori 2700, amaprotheni ayi-100 g, amafutha angama-70 g, ama-carbohydrate angama-350 g.
Imifino ebilisiwe iphekiwe, kanti kunganconywa ama-casseroles nama-stew steward. Ngaphandle kwemikhawulo, ungasebenzisa i-zucchini, utamatisi omusha, ukholifulawa, i-broccoli, isitshalo seqanda. Ngokujwayelekile, ungadla uphizi oluhlaza, ubhontshisi kanye nethanga.
Kuvinjelwa okuyisigaba kwe-vascular pathology ku-mellitus yesifo sikashukela kufakwa kuma-hamburger nakwizitsha ezifanayo, ukudla okulula, izigaxa ezinamakha, izicubu, iziphuzo ezimnandi zekhabhoni, kanye namajusi ahlanganisiwe kanye nemikhiqizo engapheli.
Imithombo esetshenzisiwe: diabetik.guru
Kubantu abanesifo sikashukela i-mellitus, ingozi yokushaywa unhlangothi ikhula kakhulu ngesifo.
Ngenxa yemiphumela yocwaningo oluningi lomtholampilo, ososayensi bathole ukuthi iziguli ezinethuba lokuhlaselwa yisifo sohlangothi, kepha ezingenawo umlando wesifo sikashukela, zisengozini encane kunesifo sikashukela.
Amathuba okushaywa yisifo sikashukela anda ngezikhathi ezingama-2,5.
Ischemic kanye ne-hemorrhagic stroke - kuyini kushukela?
Ukuthuthukiswa kwalesi sifo kungenxa yomonakalo noma ukuvalwa kwemithambo yegazi.
Ngenxa yokuthi igazi liyayeka ukugelezela ezingxenyeni ezithile zobuchopho, umsebenzi walo uyawohloka. Uma indawo ethintekile kungakapheli imizuzu eyi-3-4 izwakala iswele i-oxygen, amangqamuzana obuchopho aqale ukufa.
Odokotela bahlukanisa izinhlobo ezimbili ze-pathology:
I-Ischemic - ebangelwa yimithambo yegazi evinjiwe.
IHemorrhagic - ehambisana nokuqhuma kwethambo lomthambo.
Isici esiyisisekelo esinquma izinga lokuqagela lesi sifo umfutho wegazi ophezulu. Ukweqisa i-cholesterol “embi” kungasibangela lesi sifo. Izici zobungozi zibandakanya ukubhema nokudakwa.
Kubalulekile! Ngemuva kokuthi umzimba womuntu uqale ukuthola ukushoda komoya-mpilo, imithambo engaqondile inyusa ukugeleza komoya, idlule indawo evaliwe. Kunzima kakhulu kunabo bonke abanye abantu ukuhlaselwa yisifo sohlangothi, iziguli ezinesifo sikashukela.
Lokhu kungenxa yokuxinana kwe-atherosclerosis yemikhumbi yemilenze, ngokwesibonelo, imithambo yegazi eminingi ilahlekelwa amandla ayo okuhambisa umoya-mpilo.
Ngalesi sizathu, ukuvuvukala kokushaywa unhlangothi 2 nohlobo 2 sikashukela kuyadumaza kakhulu.
Izimpawu zokushaywa unhlangothi
Uma kutholakala izimpawu zokuqina ukuthi unhlangothi, umuntu kufanele abonane nodokotela ngokushesha. Uma ukuthuthukiswa kwalesi sifo esibi kumiswa ngesikhathi, isiguli singabuyiselwa empilweni ephelele. Izimpawu ezilandelayo ziimpawu zesifo:
Ukubuzwa kobuthakathaka noma ukushuba kobuso, izingalo, imilenze (ikakhulukazi ohlangothini olulodwa lomzimba).
Ukulahleka kwekhono lokwenza nokukwazi ukubona ukukhuluma.
Ngaphandle kwesizathu esibonakalayo, ukuvela kwekhanda elinzima.
Ukuwohloka okubukhali embonweni obonwe ngamehlo amabili noma womabili.
Ukuntuleka kokuxhumana kokunyakaza.
Ukulahleka kokulinganisela, okuhambisana nesiyezi.
Ukungajabuli noma ubunzima bokugwinya amathe.
Ungadla kanjani unhlangothi nesifo sikashukela
Esikhathini sikashukela, ingozi yokuba nesifo sohlangothi ikhuphuka amahlandla ayi-2,5. Ukushoda kwe-insulin kuhlanganisa inkambo yesifo, kwandisa ukugxila kokulimala kobuchopho futhi kwandise nengozi yokuba nezinkinga eziphindaphindwayo ze-vascular. Baphatha unhlangothi kwisifo sikashukela ngemishanguzo ye-vascular and blood-thinning.
Ukwelashwa nge-antihypertensive nakho kubekiwe futhi izindlela zisetshenziselwa ukwenza ngokwejwayelekile i-lipid metabolism. Indima ebalulekile ekwelashweni kwezifo idlalwa ngokudla okufanele kokushaywa unhlangothi kanye nesifo sikashukela. Ukudla kuzosiza ukuvimbela ukwenziwa kabusha kwezinkinga ze-vascular.
Ukudla ngemuva kokushaywa yisifo sikashukela i-mellitus kubuyisela amandla emzimbeni futhi kunciphise ukuthuthuka okuqhubekayo kwe-atherosclerosis. Isikhathi sokutakula kufanele futhi sisize ukwehlisa isisindo.
Ngokushaywa unhlangothi ngesikhathi sesigaba esibuhlungu, kusetshenziswa ukudla okune-liquid, ngoba iziguli zinenqubo yokugwinya ephazamisayo. Uma lesi sifo sishubile, sebenzisa iphenathi yokondla. Imenyu ingafaka:
isobho elibunjiwe lemifino
puree yokudla kwezingane,
ukuxuba okwenziwe ngomsoco
Lapho isiguli sesikwazi ukugwinya, kodwa siqhubeke sisembhedeni, uhlu lwemikhiqizo evunyelwe luyanwetshwa. Ukudla kufanele kulungiselelwe okusha.Kunconywa ukubilisa ukudla ngaphandle kosawoti nezinongo, usawoti emanzini noma umusi.
Ngemuva kokushaywa unhlangothi, ukudla kwabanesifo sikashukela kungafaki ukudla okuqukethe i-cholesterol. Imikhawulo kakhulu ukusetshenziswa kwe:
i-offal (isibindi, izinso, inhliziyo, ubuchopho, amaphaphu),
inyama enamafutha (ingulube, iwundlu),
inhlanzi ebhemayo kanye ne-caviar,
inyama yedada ne-goose
inhlanzi ekheniwe nenyama,
imikhiqizo yobisi enamafutha (ushizi wasekhishini, ukhilimu omuncu, ibhotela, ushizi, ukhilimu).
Ukudla kufaka okungenani ubuncane bamafutha ezilwane nama-carbohydrate alula, ngaleyo ndlela kuncishiswe okuqukethwe kwekhalori. Khipha ngaphandle umhluzi wenyama, wezinhlanzi nowekhowe, ukhawule ukusetshenziswa kosawoti.
Ukudla kokuhlaselwa yisifo sohlangothi kufaka phakathi ukudla okuqukethe usawoti omningi we-potassium, i-magnesium ne-lipotropic compendering eyenza ngokwejwayelekile umzimba we-metabolism (amantongomane, ukudla kwasolwandle, ushizi wekhishi onamafutha amancane). Ukudla okunempilo kufanele kunikeze umzimba inani elanele lamavithamini, uwoyela onamafutha kanye ne-fiber.
Kunconywa ukudla izikhathi ezingama-5-6 ngosuku ezinxenyeni ezincane. Ungasebenzisi usawoti ngenkathi upheka. Ihanjiswa ngokwahlukile kukasawoti omncane wesitsha. Ngomfutho wegazi ojwayelekile, kuvunyelwe ukungadli okudlula kuka-8-10 g kasawoti, ngokukhuphuka - kuze kufike ku-3-5 g.
Imenyu yokudla kashukela ngemuva kokushaywa unhlangothi
Iziguli ezinesifo sikashukela zivame ukuba nenkinga yokuthi ushukela wegazi ophakeme uthinta kabi imithambo yegazi. Ngokwezibalo, amathuba okuthola isifo sohudo sikashukela aphindwe ka-2,5 kunomuntu ongahlushwa yilesi sifo.
Izinhlobo zokuqhubeka kwesigameko, ubulukhuni baso kanye nezinkinga ezalandela nazo zingavuswa yisifo sikashukela. Ukwenza isimo sibe ngokwejwayelekile futhi kuvikeleke ukuphinde kubuyele emzimbeni, kunikezwa ukudla okuyisipesheli ngemuva kokushaywa yisifo sikashukela i-mellitus.
I-Stroke yinhlekelele eholela ezinkingeni eziningi ezinkulu nezincane. Isiguli singase ngokuphelele noma siphele ngokuphelele ukulawula umzimba wakhe, futhi ukuthi angakwazi yini ukukubuyisela lokhu kuye kuzoncika ezintweni eziningi.
Unhlangothi lubizwa ngokuthi ukuphazamiseka kokujikeleza ebuchosheni, lapho ukuhanjiswa kwegazi ezindaweni ezithile kuya kuba kubi noma kuyeke. Njengomphumela wokubulawa yindlala komoya-mpilo, amaseli ezingxenyeni ezithintekile zobuchopho ayafa. Unhlangothi lungaba uhlobo lwe-ischemic noma lwe-hemorrhagic:
I-Ischemic stroke kungukungazungezi kwegazi ngenxa yokwakheka kwe-cholesterol plaque noma i-damu. Kulokhu, ukubulawa yindlala komoya-mpilo kubangela ukufiphala kwe-lumen noma ukuvalwa okuphelele komthambo odambisa ubuchopho. Ngokwezibalo, ama-80% emishanguzo iyi-ischemic.
Isifo sokusha kwesibindi - ukungaphatheki kahle kwesibindi ngenxa yomonakalo esitsheni. Ukuthululwa kwegazi kungaba yinto engaphakathi noma esikhaleni esiphakathi kwe-arachnoid ne-membrane ethambile (subarchanoid). Ngokushaywa okunjalo, ingxenye yobuchopho iyafa ngenxa yokucindezelwa yi-edema ephumelelayo. Amaphesenti amakhulu wemivimbo ye-hemorrhagic ihlotshaniswa nomfutho wegazi ophakeme.
Usuvele wazi nge-cholesterol ephezulu, ukushayeka kwegazi nomfutho wegazi ophakeme. Kepha lezi akuzona kuphela izimbangela zemivimbo. Imvamisa imbangela yesifo sohlangothi ukubhema, inhliziyo nenhliziyo., Ukukhuluphala ngokweqile, ukuphuza izidakamizwa nokungalawuleki.
Kungani ukudla kubalulekile?
Inkinga isivele yenzekile. Kepha izinga le-cholesterol lisesephezulu, ukuthambekela kokwakheka kwegazi akuphelanga, futhi ukukhuluphala akudluli ngomlingo. Lokhu kusho ukuthi ukudla okufanele kwesifo sohlangothi kuba yinombolo 1.
Ukufingqa, ukudla ngemuva kokushaywa unhlangothi kunemigomo elandelayo:
Ukunikeza umzimba kusethi oludingekayo lwezakhi zomzimba. Ngaphandle kwalokhu, izitho ezibalulekile azikwazi ukusebenza ngokuphelele.
Ukudalwa kwezimo lapho ukuhlangana kwegazi kunciphisa futhi kuyeka ukuba yingozi empilweni. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi kwabanesifo sikashukela.
I-Normalization yesisindo nokuvimbela ukwanda kwayo, njengoba ukukhuluphala kuthinta ukusebenza kohlelo lwezinhliziyo nolwe-endocrine.
Awukho umehluko oyisisekelo odale ukuthi unhlangothi belimele. Ukudla ngemuva kokushaywa unhlangothi kukhethwa ngokuya ngemithetho efanayo kuzo zombili lezi zigameko.
Ungayenza kanjani imenyu?
Umthetho wokuqala wemenyu ngemuva kokuhlaselwa ukwenqaba ibhotela. Pheka on sunflower, isaladi isizini ngamafutha omnqumo, odlwengulwayo noma omisiwe. Lokhu kubalulekile!
Umthetho olandelayo ukwenqatshwa kwenyama enamafutha. Ukudla kokuhlaselwa unhlangothi kuvumela ukusetshenziswa kwe-120 g yenyama ebomvu ngosuku. Futhi qaphela: inyama iyabanjiswa noma ibilisiwe. Ngokushintshwa, kwesinye isikhathi kungabhakwa.
Nikeza ukudla okusheshayo nokudla okulula ngokuphelele. Lokhu kudla kunzima ngisho nakubantu abaphilile, futhi ngemuva kokushaywa unhlangothi kumane akwamukeleki.
Yehlisa ukusetshenziswa kweqanda. Yenza imenyu ukuze kungasetyenziswa izingcezu ezingaphezu kwezintathu ngesonto. Ukudla ngemuva kokuhlaselwa isifo sohlangothi kuhloselwe, phakathi kokunye, ukwehlisa i-cholesterol, futhi emaqanda kuningi.
Misa ukuncika kwesinkwa, kuma-roll, kuma-pastries nakumakhukhi. Uma ungeke uphile ngaphandle kwesinkwa nhlobo, bese uthenga isinkwa sombila, imikhiqizo ye-oatmeal noma isinkwa esiphelele sokusanhlamvu.
Ukudla ngemuva kokushaywa unhlangothi ekhaya kuklanyelwe ngendlela yokugwema umuzwa oyindlala wokulamba. Udinga ukudla kaningi, kepha wenze izingxenye ezincane kunangaphambili. Awukwazi ukudla ngokweqile, ngoba kwabaningi kuba umgomo obalulekile ukwehlisa isisindo.
Masinyane ngemuva kokushaywa unhlangothi, usawoti awufakwa ekudleni. Kuholela ekuseni kokugeleza kwamanzi. Ngaphezu kwalokho, kukhipha uketshezi lwezicubu ezizungeze imithambo, ngalo ndlela lukhulisa umthwalo ohlelweni lwe-vascular. Ukusetshenziswa kukasawoti kuvame ukudala ukwanda komfutho wegazi, futhi lokhu akufanele kuvunyelwe. Ukudla ngemuva kokushaywa unhlangothi (ischemic noma hemorrhagic) kufanele kungabi nosawoti.
Lapho isimo sesiguli sithuthuka kakhulu, uyakwazi ukwenqaba ukudla okusha (hhayi okunosawoti). Kulokhu, ukungezelelwa okuncane kasawoti kuvunyelwe. Kepha inketho enhle yilapho isiguli ngemuva kokushaywa unhlangothi sesijwayela ukwaneliseka ngezitsha ezinosawoti.
Kudalwa kanjani ukudla okuhambisana nesifo sohlangothi? Imenyu kumele ifake inani elikhulu lemifino nezithelo. Kubalulekile ukuzidla nsuku zonke unyaka wonke. Kukhethwa imifino nezithelo eziphakeme ku-fiber, folic acid, novithamini B.
Uma izinga likashukela lilijwayelekile, khona-ke nsuku zonke kufanelekile ukudla ibhanana, ngoba liqukethe inani elikhulu le-potassium. IPotassium yehlisa amathuba okuba nesifo sohlangothi lwesibili ngama-25%. Izaqathi, i-legumes, i-asparagus, isipinashi, u-soy, iklabishi, i-zucchini ne-isitshalo seqanda, ama-radishes kufanele afakwe ekudleni.
Ubuza ngamazambane, ngoba lo imifino ethandwa kakhulu futhi engabizi etafuleni lethu? Maye, amazambane ayintandokazi ngabaningi akuyona imifino ewusizo kakhulu. Ukudla kokushaywa unhlangothi akudingi ukwenqatshwa ngokuphelele kwamazambane, kepha kufanele kufakwe ekudleni kungabi ngaphezu kabili ngesonto.
Kepha ama-cranberry nama-blueberries kufanele abe kwimenyu kaningi ngangokunokwenzeka. Lawajikijolo awusizo kakhulu ngemuva kokushaywa unhlangothi, ngoba angama-antioxidants futhi asiza ukubuyisela ukuhamba kwegazi okujwayelekile, kunciphisa ukunamathela kwamangqamuzana abomvu egazi.
Ushizi kufanele ungafakwa kwimikhiqizo yobisi. Ziqukethe i-cholesterol eningi. Kuyaluleka ukuthi ngezikhathi ezithile usebenzise ukhokho onamafutha amancane, i-kefir noma ubisi olubilisiwe olubilisiwe.
Khetha i-gruel njengesitsha esisehlangothini. Ngokudla kwasekuseni, ungapheka i-oatmeal ngezithelo. I-Buckwheat noma i-porridge yerayisi izoba yinhle phakathi nosuku, ikakhulukazi uma kusetshenziswa irayisi elinsundu.
Ukudla ngokushaywa unhlangothi kufaka phakathi izinhlanzi zasemanzini. Kuyinhlanzi yasolwandle, izinhlanzi zasemfuleni ayiqukethe i-omega-3 acid edingekayo. Abantu abaningi bawukhipha lo mkhiqizo ngoba bebheka ukuthi izinhlanzi zibiza kakhulu, kepha kuyadingeka, uma kuphela njengomthombo we-phosphorus, onomphumela omuhle ebuchosheni, uthuthukisa imetabolism.
Abathandi benyama kufanele banikeze ukuthandwa kunogwaja, i-turkey, i-veal. Idada nenkukhu zingapheka kuphela ngaphandle kwesikhumba. Kepha imikhiqizo (ubuchopho, isibindi nezinye isibindi) kuzodingeka ishiywe. Lokhu kudla kuqukethe inani elikhulu le-cholesterol.
Emini, kubalulekile ukuphuza amanzi, ahlanzekile, alula, hhayi amakhabhoni. Kweziphuzo, ungafaka iziphuzo zezithelo ne-uzvar (i-compote yezithelo emisiwe) ekudleni. Umhluzi we-rosehip ufanelekile, hhayi jelly omnandi kakhulu, i-kvass, mhlawumbe eyenziwe ekhaya, amajusi amasha.
Ake sithi itiye, kodwa lisakazwa kancane nje, kepha ikhofi linqatshelwe ngokuphelele. Akunakusho ukuthi kufanele uphuze ushukela omnandi, uvusa izinga likashukela, uvimbele ukulwa nokukhuluphala, kulimaze nemikhumbi emincane.
Ngemuva kokushaywa unhlangothi, udinga ukukhohlwa ngophuzo oludakayo, luzokulimaza kakhulu.
Ukudla kokushaywa unhlangothi akunamandla kakhulu. Kungcono ukuthi uxoxe nodokotela wakho nodokotela onempilo ngale ndaba. Ochwepheshe bazonikeza izincomo ezifanelekile ngokusho ukuthi ungenza imenyu ehlukahlukene yemikhiqizo efanelekile.
Ungamniki isiguli sithosiwe noma sibheme. Uma engathandi ikhishi elinamanzi nelibilisiwe, bese upheka kuhhavini, kodwa ngaphandle kwamafutha. Qiniseka ukuthi upheka amasobho nomhluzi. Uma isiguli sinomsebenzi wokugwinya, gaya ukudla ku-blender noma upheke i-smoothie.
Esikhundleni sikasawoti, engeza izinongo ezithambile namakhambi, lokhu kuthuthukisa ukunambitheka, ukuhogela futhi kunciphise umuzwa wokuntuleka kasawoti.
Lokhu yilokho okudliwa ngumuntu ngemuva kokushaywa unhlangothi:
Ukudla kwasekuseni kwasekuqaleni: i-oatmeal engenazithelo ngezithelo noma ngezithelo ezomisiwe, ujusi noma itiye elibuthakathaka, amanye amantongomane noma uju.
Ukudla kwasekuseni kwasekuseni: Isaladi eliluhlaza okotshani noma imifino, isinkwa esiphelele sokusanhlamvu.
Isidlo sasemini: isobho ngocezu lwenyama ebunjiwe noma inhlanzi yasolwandle, iphalishi elincane le-buckwheat, isaladi lezithelo noma nje izithelo.
Ungadla: ushizi wekhishi onamafutha aphansi (ungangeza ama-apricots noma omiyane abomisiwe abancane).
Ukudla isidlo sakusihlwa: Ucezu lukarabi obilisiwe noma inkukhu ngaphandle kwesikhumba, ingxenye yamazambane ecubuziwe, ingilazi yesiphuzo sezithelo noma i-compote.
Ukuze uzuze umphumela obekiwe futhi uzuze ukuvuselelwa okuphezulu, into esemqoka ukukholisa umuntu ukuthi ukudla okufanele akuyona into emfushane, kodwa kunesidingo. Ngemuva kwalokho uyobe ungabalingani bakho ekulweni nemiphumela yokugwazwa.
Isifo sohlangothi nesifo sikashukela kuyimiqondo ehlobene kakhulu. Ukuba khona kwalokhu emzimbeni kusikisela ukuthi kunethuba elikhulu lokushaywa unhlangothi ngokuzayo.
Ngokwezibalo, abantu abanesifiso sokuso, kodwa abanasifo sikashukela, bavikelekile kulolu bhubhane.
Kepha abanesifo sikashukela basengcupheni - amathuba okuthola lokhu kugula kubo aphezulu kakhulu.